Homeसमाचारकक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक, एक जनाको रद्द
February 1, 2021 admin समाचार 4361
राष्ट्रिय परीक्षा बो’र्डले कक्षा १२ को परीक्षाफल प्र’काशित गरेको छ । बोर्डको आज बसेको बैठकले परी’क्षाफल प्रकाशित गरेको चार लाख ३३ हजार २७२ सम’भागी रहेको परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले बताए ।
सह’भागी मध्ये एक जनाको परीक्षा रद्द भएको छ भने स्थगित ११ हजार ४९० छ । गत मंङ्सिरमा भएको सो परीक्षामा २.४१ देखि २.८० जीपीए ल्या’एकाा छन् । २.८० जीपीए ल्या’उने विद्यार्थी संख्या एक लाख ९३ हजार १२ रहेको छ ।
वै’शाख/जेठमा नै लिइने कक्षा १२ को परीक्षा कोरोना महामारीका कारण मंसिरमा मात्रै सञ्चा’लन गरिएको थियो । कक्षा १२ को परीक्षा गत मंसिर ९ देखि १६ गतेसम्म सञ्‍’चालन भएको थियो।
बोर्डले कुल पूर्णाङ्क’मध्ये ४० प्रतिशतको संक्षिप्त परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । कार्यविधिले ४० प्रतिशत पूर्णा’ङ्कको संक्षिप्त परीक्षा, ४० प्रतिशत पूर्णाङ्कको कक्षा ११ को प्राप्तांक र २० प्रतिशत पूर्णाङ्कको विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्यांकनका आधा’रमा कक्षा १२ को मूल्यांकन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश कार्यालयले विद्या’र्थीको प्राप्तांक इन्ट्री गराएपछि केन्द्रीय सर्भरमा नम्बर इन्ट्री ग’रिएको बोर्डले जनाएको छ । यस पटक देशभरका ४ हजार १ सय परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सञ्चा’लन भएको थियो । यसअघि १ हजार १ सय परीक्षा प’रीक्षा केन्द्रमा मात्रै परीक्षा हुन्थ्यो । – इताजा खबरबाट
December 29, 2020 admin समाचार 5471
January 28, 2021 admin समाचार 4281
लोकप्रिय पाल्पाली स’र्जक तथा रोईला गीतका राजा भनेर चि’निने पाल्पाली गा’यक शिरिष देवकोटाको नयाँ गीत ‘बोलिदेउ आधार’ सार्वजनिक भएको छ । लामो समय देखि नेपाली गीत संगीतमा आफ्नो परिचय फाराकिलो बना’उन सफल शिरिष देवकोटाले नयाँ
May 17, 2021 admin समाचार 2814
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (218832)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (210473)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (210164)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (207761)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (205138)